အမည်မသိစာအုပ်: ကမ်းခြေ (အပိုင်း+နှစ်)
သိပ်ပြီးကျပ်နေတယ်လို့ မဟုတ်သလို၊ အရည်တွေရွှဲနေသည့်တိုင် ချောင်လှတယ်လုိ့လဲ ဆိုလို့မရဘူး။ စီးစီးပိုင်ပိုင် အိအိနွေးနွေးနဲ့ တစ်ထစ်ချင်း ၀င်သွားတာ။ ယွန်းရဲ့ အဖုတ်လေးနဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ဒုတ်က ဆယ်တန်းတုန်းက သင်ခဲ့ရတဲ့ ဦးပုညရဲ့ ရေသည်ပြဇာတ်ထဲက စကားနဲ့သာ ပြောမယ်ဆိုရင် တိုင်း၍ရက်တဲ့ ပက္ကလာ မိုးရွာသည်နှင့် အခန့်သင့်ဆိုသလို အဆင်ပြေပြေ ချောချောမွေ့မွေ့ ရှိနေတယ်ပဲ ဆိုကြပါတော့ (မြန်မာစာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းထဲကလူတွေတော့ အနော့ ကလော်တုတ်နေကြမလား မသိဘူး .. ဟီး :P)
တစ်ညလုံး တပ်မက်ခဲ့ရတဲ့ ရှမ်းမချောလေးရဲ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းထဲကို ကိုယ့်လီးဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့တင် လူက ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ထိပ်ဆုံး ရောက်သွားချင်သလို ဖြစ်နေတာ (ဘရိုဒွန်ဂျွန်စကား ခဏငှားသုံးသည် ;))။ တော်သေးတယ်။ လိင်တန်ရဲ့ အပေါ်ကနေ ကွန်ဒွန်း စွပ်ထားလို့သာ အဲဒီစိတ်ကို ပြန်ကွန်ထရိုးလုပ်လို့ရနေတာ။ အရမ်းကြီးလောကြီးပြီး အတင်းလည်း ဆောင့်ထည့်တာမျိုး မလုပ်ဖြစ်အောင် လူကို သတိထားနေရတယ်။ တစ်ရစ်ခြင်း ၀င်နေတဲ့ လိင်အင်္ဂါအခြင်းခြင်း ထိတွေ့မှုကို ကျနော့် မန်မိုရီထဲမှာ စွဲနေအောင် ခံစားမိသလို၊ ယွန်းလည်းပဲ ကျနော့်နည်းတူ ဒီအတွေ့ကို မေ့မရအောင် ဖြေးဖြေးခြင်းပဲ ခရီးသွားလိုက်တယ် ..။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ခနကြာတော့ အရည်တွေရွှဲနစ်နေတဲ့ သူ့အဖုတ်လမ်းကြောင်း တလျှောက် ပြည့်နှက်နေအောင် ကျနော့်လိင်တန်က အပိုင်သိမ်းပြီး နေရာယူလိုက်ပြီ။ အဲဒီနောက်တော့ ချော့တာတွေ၊ ချူတာတွေ လုပ်မနေတော့ဘူး။ ခါးကျင်ကျင်လေးပေါ်ကို လိပ်တင်ပေးထားတဲ့ ဂါဝန်လေးကို ကြိုးစတစ်ခုလို သဘောထား၊ လက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ပြီး လိင်တန်ကို ဆွဲထုတ်ပြီး ဆတ်ခနဲ ဆောင့်ချလိုက်တာ ဖင်လုံးကော့ကော့လေးတောင် ဆတ်ခနဲ တုန်တက်သွားတယ်။
“အား … ထိတယ် … ကို …ထွန်း … ရှီးးး”
ထိတာက ယွန်းမှ မဟုတ်ဘူး .. ကျနော်လည်းပဲ ထိတာပဲ။ ဂိတ်ကုန်အောင် ၀င်သွားတဲ့ လိင်တန်ထိပ်ဖူးကနေ ဒုတ်ခနဲ ဖြစ်လာတဲ့ အရသာဟာ အီစိမ့်နေအောင် ကောင်းတာကိုးဗျ။ တစ်ချက်ချင်း ဆောင့်ပေးရင်းကနေ Tempo ကို ကားကက်ဆက် Volume လှည့်သလို တဖြေးဖြေးချင်း လှည့်ပြီး မြှင့်လိုက်တယ်။ တစ်ခုကောင်းတာက ယွန်းက ကျနော်ဆောင့်ပေးတာကိုပဲ ငြိမ်ခံနေတတ်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုး မဟုတ်ဘူး။ သူကိုယ်တိုင်လည်း .. ကိုထွန်း .. ကောင်းတယ်.. မညှာနဲ့ .. နာနာလေး ဆိုတဲ့ အသံတွေ စုံအောင် ညည်းရင်း နောက်ကို ကော့ပြီး တန်ပြန်ဆောင့်ပေးတာပဲ။ သူ့ဆောင့် ကိုယ်ဆောင့် .. ကောင်းမှကောင်း !! .. တဖြောင်းဖြောင်း .. တဖတ်ဖတ် သံတွေ သောသောကို ညံနေတော့တယ်။
“အားးး .. ပြီးတော့မယ် … ဆောင့် .. တအားဆောင့် … ကောင်းတယ် .. တအားကောင်းတယ် … ရှီး”
“ရှစ် .. ယွန်းးးး … ကိုယ် မထိန်းနိုင်တော့ဘူး .. ထွက် .. ထွက်တော့မယ်”
“အီးးး … ယွန်းလည်း ပြီးတော့မယ် … လုပ် … လုပ် …. အူးးးးးးး”
တခြားသူငါတွေ အိပ်စက်နေမယ့် အချိန်မှာ ကျနော်နဲ့ ယွန်းနဲ့ကတော့ မီးကုန်ယမ်းကုန်ကို ဆွဲပြီး ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်သလို ကာမလမ်းဆုံးကို ရောက်သွားကြတယ်။ ယွန်းက အသားဖြူတဲ့ ရှမ်းမလေးဆိုတော့ အဖုတ်ထဲမှာ အရည်တအားရွှဲတာ .. တကိုယ်လုံးတုန်ခါပြီး နောက်ဆုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ကျဲကျဲတောက် အရည်တွေ အဖုတ်ထဲက စိမ့်ကျတာ အောက်ကကျောက်သားပြင်ပေါ်မှာ နေရာလေးတောင် ကွက်ပြီး စိုသွားတယ်။ အဖုတ်အတွင်းသားတွေ ဆိုတာလည်း အပြတ်ကို လှုပ်ရှားပြီး လိင်တန်ကို ဖျစ်ညှစ်နေသေးတာ ...။
နားထဲကနေ လေတွေ တစစ်စစ်နဲ့ ထွက်သွားသလားတောင် ထင်ရပြီး ကျနော်လည်း အကောင်းကြီး ကောင်းသွားတယ်။ အသားဖြူဖြူ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် ဖွံ့ဖွံ့နဲ့ အချောကြီးချောတဲ့ ရှမ်းမလေးကို စိတ်ကြိုက် နောက်ဘက်ကနေ ကျုံးရတာ မကောင်းခံနိုင်ယိုးလား။ လိင်ချောင်းတလျှောက် သုတ်ရည်တွေ ပြေးထွက်ပြီး ထိပ်ဖူးကနေ ပန်းထုတ်လိုက်တာ ကွန်ဒွန်းသာ စွပ်မထားလို့ကတော့ အဖုတ်အတွင်းမှာ ပြည့်လျှံသွားမှာ သေချာလှတယ်။ တစ်ညလုံး အောင်းထားတဲ့ သုတ်ရည်ပူတွေ အကုန် ပန်းထုတ်လိုက်ရတဲ့ အရသာဟာ ပြောမပြနိုင်အောင် ကောင်းတဲ့ ခံစားမှုပဲဗျ ...။
ခရီးဝေးထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အပြင် တစ်ညလုံးလဲ ကောင်းကောင်းမအိပ်ရသေး .. ဒီကြားထဲ တအားကုန်လိုးဆောင့်ပြီး အကြမ်းစားပြီးသွားတာဆိုတော့ လူက ခေါင်းတောင်မှ မထောင်နိုင်တော့ဘူး။ ကုန်းပေးထားတဲ့ ယွန်းရဲ့ ကျောပေါ်မှာ ပုခုံးမှေးတင်ပြီး မျက်စိတွေ အလိုလိုမှိတ်ကျသွားတယ်။ အစောတုန်းက နှစ်ယောက်သား လိုးဆောင့်သံတွေ၊ အော်ညည်းသံတွေနဲ့ ပွက်ပွက်နှက်နေတဲ့ သန့်စင်ခန်းထဲလည်း အခုကျတော့ အိမ်မြှောင်စုတ်ထိုးတာကို ကြားရလောက်အောင် တိတ်ဆိတ်သွားပါရော ..
အဲဒီလို နှစ်ယောက်သား ထပ်လျက် မှိန်းနေပြီး တစ်လောကလုံး တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အခိုက်မှာ
“တုံ .. တုံ .. တင် .. တင် .. တင် .. တုံ .. တုံ”
ရုတ်တရက် ထမြည်လာတဲ့ ဖုန်းသံကြောင့် မေ့မျောနေတဲ့ နှစ်ယောက်သား ကမန်းကတမ်း လူချင်းကွာပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကြောင်စီစီ မျက်လုံးလေးတွေလည်း အလန့်တကြား ကြည့်ကြတယ်။ သတ္တလောကကြီးနဲ့ ခေတ္တခဏ အဆက်ပြတ်သွားတာဆိုတော့ ရုတ်တရက် ဖုန်းမြည်လာတဲ့ အသံ ဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာ နှစ်ယောက်စလုံး မသိကြသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဒီအသံဟာ ဘယ်ကနေ လာတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်စလုံး သိသွားကြတယ်။ အဲဒီမှာ မျက်လုံးပြူးစရာ ထပ်ဖြစ်ပါလေရော ..
လား .. လား !!
Ring tone အသံက ကျနော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးစီက မဟုတ်ဘူး။ သန့်စင်ခန်းရဲ့ ထောင့်စွန်းဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ cubicle တစ်ခုထဲက ထွက်လာတာ။ အိုးမိုင်ဂေါ့ … ဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ဘဲ .. နောက်ထပ် လူတစ်ယောက် ရှိနေတာဗျ ..
ယွန်းတော့ ဘယ်လိုနေမလဲ မသိဘူး။ ကျနော်တော့ နားထင်နားရင်းတွေ ပူတက်သွားပြီး ကမန်းကတမ်း လိင်တံပေါ်က ကွန်ဒွန်းကို ဆွဲဖယ်၊ ဘေဇင်အောက်က အမှိုက်ပုံးထဲ လှမ်းပစ်၊ ဒူးခေါင်းအောက် ရောက်နေတဲ့ ဘောက်ဆာရော ဘောင်းဘီပါ ဆွဲတင်နဲ့ တော်တော်အလုပ်များသွားတယ်။ ယွန်းလည်း ကျနော့်လိုပဲ .. ပြာပြာသလဲနဲ့ အလုပ်ရှုပ်သွားတယ်။ ကိစ္စ၀ိစ္စ ပြီးတာကတော့ ကျနော်က သူ့ထက်အရင်ပြီးတာဆိုတော့ သောင်းကျန်းတုန်းက သောင်းကျန်းပြီး အခုတော့မှ ရှက်သလိုလို ဖြစ်နေတဲ့ ကျနော်ကပဲ အပြင်ကို အရင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်တော့ အဲဒီနေရာမှာကို ဆက်မရပ်နေချင်တော့တာနဲ့ ကိုယ်ထားခဲ့တဲ့ ကျောပိုးအိတ်ကို ပြန်ယူဖို့ဆိုပြီး ရီစက်ရှင်ကောင်တာဘက်ကို ခပ်သုတ်သုတ်လျှောက်လာခဲ့မိတော့တာပဲ။
ကမ်းခြေကို ဖြတ်တိုက်လာတဲ့ ပင်လယ်ပြင်ရဲ့ လေညှင်းတွေဟာ ချွေးပြန်နေတဲ့ ကျနော့်မျက်နှာကို ဖြတ်တိုက်သွားတဲ့အချိန်၊ အနည်းငယ် အေးမြသလို ခံစားလိုက်ရတဲ့အလျောက် ကျနော် သန့်စင်ခန်းထဲက အဖြစ်ကို ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ အဲဒီတော့မှပဲ ကျနော့်ခေါင်းထဲ အတွေးတစ်ခု ရောက်လာတယ်။ တခြားတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒီအချိန်ကြီး ကျနော်တို့နဲ့အတူ ရှိနေတာ ဘယ်သူဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကို။
ညဘက်ကြီးတော့ ဟိုတယ်ရဲ့ ဧည့်သည်တွေ ဘယ်သူမှ ဒီရေကူးကန်နဲ့ တွဲလျက်ရှိတဲ့ သန့်စင်ခန်းထဲ လာဖို့အကြောင်း မရှိလောက်ဘူး။ ဒီအချိန်ကြီး ရေဆင်းကူးတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ ဒီတော့ ဖြစ်ခြင်းဖြစ် .. ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းထဲကပဲ ဖြစ်ရမယ်။ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းထဲမှာလည်း ဖြစ်နိုင်တာက ညတာဝန်ကျတဲ့သူပဲ ဖြစ်ရမယ်။ အဲဒီ ညတာဝန်ကျတဲ့သူထဲက မိန်းကလေးဆိုတော့ .. အိုး မိုင်ဂေါ့ .. ဒါ ... ဒါ
ကျနော့်အတွေး မှန်တယ်၊ မမှန်ဘူးဆိုတာ ကျနော် ရီစက်ရှင်ကောင်တာရောက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ရေကူးကန်ဘက်ကနေ လျှောက်လာကြတဲ့ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကို မြင်လိုက်တာနဲ့တင် သိလိုက်ပြီ။ နှစ်ယောက်သား ဘေးချင်းယှဉ်အနေအထား မဟုတ်ပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က ခြေတစ်လှမ်းလောက်အကွာအဝေးနဲ့ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် စကားစမြည်ပြောရင်း လျှောက်လာနေကြတာ။ ရှေ့က နန်းယွန်းဝေဆိုတဲ့ ကျနော် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် လိုးထားခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူချောချော ရှမ်းမလေး .. နောက်တစ်ယောက်က အခု ကောင်တာကို ပြန်ရောက်ချိန်မှာ မတွေ့တော့တဲ့ ၀ါဆိုဦးဆိုတဲ့ ညိုချောမလေး ..
ရှီး မှပဲ .. လူကို ဘာပြောလို့ ပြောရမှန်း မသိဘူး .. ဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့ အဲဒီနားမှာ ဆက်နေရမှန်းလည်း မသိဘူး
ဒါပေမယ့် လူကို ကျဉ်းထဲကျပ်ထဲ အခြေအနေကနေ လွတ်အောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ အကြောင်းတရားတစ်ခုတော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ ဖြစ်လာတယ်။ တခြားတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဖုန်းသံမြည်လာတာ။ ဒီတစ်ခါတော့ တခြားသူရဲ့ ဖုန်းမဟုတ်ဘူး။ ကျနော့်ဖုန်းက မြည်တာ။ ခေါ်တာကလည်း သက်ဆိုင်သူက ခေါ်တာ ..။
"ကိုကြီး .. ဘယ်ရောက်နေပြီလဲ"
"အခုလေးတင် ဟိုတယ်ကို ရောက်တာ .. သဲက အိပ်မနေဘူးလား"
"အိပ်နေတာပဲ .. စိတ်ထဲသတိရလို့ နိုးလာတာ .. ဟိုတယ်ရောက်နေရင် လာခဲ့တော့လေ .. သဲတို့အခန်းက ၃၀၁ .. မြန်မြန်လာခဲ့တော့နော် .. လွမ်းတယ်"
"အင်းပါ .. လာပြီ .. လာပြီ .. အခုပဲ လာမယ် .. မွမွ"
ဖုန်းကိုချပြီးနောက် အနားရောက်လာတဲ့ ယွန်းကို ကျနော်က အားနာတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ကြည့်မိတော့၊ ယွန်းက သူနားလည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ ပြန်ကြည့်ပြီး လက်တစ်ဖက်နဲ့ သွားတော့ဆိုပြီး ခါပြတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ခံစားမှုကို ရိုးရိုးသားသား ထုတ်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်အံ့အားသင့်သွားတာဗျ။ One night stand ဆိုတာ လိင်ကိစ္စကို ခံစားချင်ကြတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေ၊ မိန်းကလေးတွေအတွက် ထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်လည်း ဒါမျိုးညတွေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်၊ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ခဲ့ကြပြီး အချိန်တန်တော့ သူ့လမ်းသူသွား၊ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွားပေါ့။ တွယ်ပတ်ရစ်နှောင်နေတာတွေ ဘာတွေ မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ယွန်းကိုတော့ ကျနော့်စိတ်ထဲ ဒီလိုသဘောထားလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ ဘာဖြစ်လို့ ခါတိုင်းလို ပြီးပြီးရော စိတ်ဓါတ်မမွေးနိုင်တာလည်းဆိုတာကို ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်တောင် အံ့သြတယ်။ တိတိကျကျတော့ အဖြေရှာမနေနိုင်ဘူး။ သက်ဆိုင်သူက ခေါ်နေပြီလေ။ လက်ထဲပြန်ရောက်လာပြီ ဖြစ်တဲ့ ကျောပိုးအိတ်ကို ကောက်လွယ်ပြီး ပင်လယ်ဘက်ကို မျက်နှာမူထားတဲ့ ၃၀၁အခန်းကို သွားဖို့ ခြေလှမ်းပြင်လိုက်တယ်။ အဲဒီအခိုက်အတန့်မှာ စိတ်ထဲတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာနဲ့ အနားမှာ ၀ါဆိုဦးရော .. တခြားသူတွေ ရှိနေသေးတာရော ဘာဆိုဘာမှ မတွေးမိတော့ဘူး။ ချက်ချင်းပင် လူကို ချာခနဲ ပြန်လှည့်ပြီး ကိုယ့်နားမှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ရှိနေသေးတဲ့ ယွန်းရဲ့ နဖူးပြင်လေးကို ဖျတ်ခနဲ ငုံ့နမ်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ I value you လို့ ပြောပြီး လှည့်ထွက်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီ I value you ဆိုတဲ့ စကားဟာ ဘယ်လောက်တာသွားလဲ ဆိုတာ နောက်ထပ်ပို့စ်တွေမှာ ထပ်ပြောကြတာပေါ့ ...။
ဒီနေရာမှ မပြောမဖြစ်နဲ့ ပြောရတော့မယ် အကြောင်းကတော့ ကျနော့် သက်ဆိုင်သူအကြောင်းပါ။ တကယ်တမ်းကျတော့ သူ့အကြောင်းကို ပြောမယ်ဆိုရင် သီးသန့်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ ပြောမှကို ဖြစ်မှာပါ။ ဆွတ်ပျံ့ ကြည်နူးဖွယ်ရာတွေ၊ လွမ်းမောဆွေးမြည့်ဖွယ်ရာတွေ၊ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေက သူနဲ့ ပတ်သက်ရင် အပြည့်မဟုတ်လားဗျ။ ဒါပေမယ့် လောလောဆယ်တော့ အချိန် မတန်သေးလို့ အကြမ်းဖျဉ်းပဲ ကျနော် ပြောပြထားပါ့မယ်။
ကျနော်နဲ့ ကျနော့်သက်ဆိုင်သူက တစ်နယ်ထဲက မဟုတ်ပါဘူး။ အကယ်၍သာ သူရော၊ ကျနော်ပါ နိုင်ငံရပ်ခြားက တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ ကျောင်းမတက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် အခုလိုမျိုးဆုံတွေဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ဖြစ်လာနိုင်စရာ မရှိပါဘူး။ ဆုံတွေ့ခဲ့သည်တိုင် သူဟာ သိပ်လှတဲ့ကောင်မလေး တစ်ယောက် ဖြစ်မနေခဲ့ဘူးဆိုလျှင် ကျနော့်သက်ဆိုင်သူ ဖြစ်လာအောင် ကျနော် ကြိုးစားမိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ၀န်ခံထားပါရစေ။
ကျနော့်သက်ဆိုင်သူဟာ အနီးစပ်ဆုံး ဘယ်သူနဲ့တူလဲလို့ ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင် မိုးယုစံနဲ့ အတော်တူတယ်ဗျ။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် အနေအထားကလည်း မဆိုးဘူး။ ရှိသင့်ရှိထိုက်တာတွေ အပြည့်ရှိတယ်ပေါ့။ တီတီတာတာနဲ့ ပြောတတ်ပြီး သူစိတ်ပါရင် စိတ်ပါသလို ကလူ၏သို့ .. မြူ၏သို့ကလည်း လုပ်သေးတာဗျ။ ဒီတော့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မပြောတော့ဘဲ အကျဉ်းချုံးလိုက်ရမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ လက်ရှိဘ၀ဟာ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး နားလည်မှုအပြည့်ရှိယုံမက၊ Healthy sex life ပါ ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ပဲ ဆိုပါရစေဗျာ …။
ခရီးပန်းထားတဲ့အရှိန်ရော .. ခပ်ပြင်းပြင်း လိင်ဆက်ဆံထားခဲ့တဲ့ အရှိန်ရောပေါင်းပြီး ကြိုတင် ယူထားတဲ့ အခန်း ၃၀၁ ရောက်သွားတာနဲ့ လူက တချိုးထဲ အိပ်ပျော်သွားတယ်ဗျ။ တစ်နှစ်တာပတ်လုံး အလုပ်တွေဖိစီးပြီး ကောင်းကောင်းကန်းကန်း အနားယူခဲ့ရတာရယ်လို့ သိပ်မရှိခဲ့တော့ .. မွှေးပျံ့ ဖြူဆွတ်နေတဲ့ နှစ်ယောက်အိပ်မို့ရာကြီးထက်မှာ ကိုယ့်သက်ဆိုင်သူကို ဖက်ပြီး အိပ်ရတဲ့အရသာဟာ ဘာစည်းစိမ်နဲ့ မလဲနိုင်ဘူးရယ်လို့ ကျနော်ပြောရင် ကိုယ့်ဆြာတို့ လက်ခံကြမှာပါနော် .. ။
ဘယ်လောက်တောင် အိပ်မောကျသွားတယ်ဆိုတာ ကျနော် မသိဘူး .. နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျနေရာကနေ အရင်ဆုံး ကျနော့်နားထဲမှာ ၀ုန်းခနဲ ၀ုန်းခနဲ အသံတွေ စည်းချက်မှန်မှန်နဲ့ ကြားလာရတယ်။ အဲဒီအသံနောက် နားစွင့်လိုက်မိပြီး အာရုံပြုမိတဲ့အချိန်မှာ ကျနော့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်နေရာမှာလည်း တ၀ုန်းဝုန်းနဲ့ သွေးတွေ တိုးသလို စတင်ပြီး ခံစားလာရတယ်။ ဘယ်နေရာလဲဆိုတာ မျက်မှောင်ကျုံ့ ပြီး အာရုံခံလိုက်တော့ .. လား လား .. မနက်ခင်းမှာ သစ်သားချောင်းလို ဖြစ်နေတတ်တဲ့ ကျနော့် လိင်တံဆီကပဲဗျ (Morning wood ကို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ဆိုသည် .. ဟီး)
ပြိုကွဲနေတဲ့ အသိစိတ်တွေက ဟိုတစ်စ၊ ဒီတစ်စနဲ့ ကျနော့်အာရုံထဲ ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်၊ မျက်တောင်ကို ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်နဲ့ ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတော့ အရင်ဆုံး သတိထားမိတာ အခန်းထဲမှာ မီးထွန်းထားတာ မဟုတ်တော့သည့်တိုင် မှောင်မနေတော့တာပဲ။ မို့ရာနဲ့ ကပ်လျက်နံဘေးမှာ ရှိတဲ့ Full Height မှန်ချပ်ပြတင်းပေါက်ကြီးကို လိုက်ကာနဲ့ အပြည့်ကာထားပေမယ့် အဲဒီလိုက်ကာသားကို ဖောက်ထွင်းပြီး အလင်းရောင်က အခန်းထဲ ရောက်နေပြီ။ ခေါင်းစောင်းပြီး လှိုင်းသံတွေကြားနေရတဲ့ ပင်လယ်ဘက်ခြမ်းကို လှမ်းကြည့်ပြီးတော့နောက် .. ကိုယ်ပေါ်မှာ လွှမ်းခြုံထားဆဲဖြစ်တဲ့ Blanket အဖြူကို လှမ်းကြည့်မိတော့ .. ကျနော့်ခါးစပ်နေရာမှာ ဖောင်းဖောင်းကြီး မောက်ထနေတာ တောင်ကုန်းတစ်ခုလိုပဲ။ နောက်ပြီး အဲဒီ ဖောင်းဖောင်းကြီးကလည်း ငြိမ်ငြိမ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘဲ ပင်လယ်ရေထဲ မျောပါနေတဲ့ ဗောကွင်းလို နိမ့်လိုက် မြင့်လိုက်ဖြစ်နေတာ။ စောင်စတစ်ဖက်ကို ဆွဲပြီး လှန်တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ .. တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတဲ့ နေရာမှာရှိတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခေါင်းကို တွေ့လိုက်ပါရော …။
"ပြွတ် .. ဟိုင်း … ဟိုင်း … ဂွတ်မောနင်း .. ကိုကြီး"
ပြောင်ချော်ချော် မျက်နှာပေးနဲ့ မျက်စိတစ်ဖတ်မှိတ်ပြပြီး နှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ ကျနော့်သက်ဆိုင်သူရဲ့ ပုံစံကို ကြည့်ပြီး ကျနော်တော့ ရယ်ချင်တော့တာပဲ။ ခိုးစားတုန်း လူမိသွားလို့ ပါးစပ်ထဲက ပြန်ချွတ်ပြီး ညာတာပါတေးနဲ့ လှမ်းနှုတ်ဆက်တဲ့ အထာလေး။ လက်ထဲမှာ ခိုးထုတ်ခိုးထည်အဖြစ် ရှိနေတာက တံတွေးရည်တွေ ထိပ်ပိုင်းမှာ စိုနေပြီး မာရဲတင်းပြောင်နေတဲ့ ကျနော့်ကောင် .. ဟီး .. မနက်ခင်းအချိန်ဆိုတော့ ပူပူနွေးနွေးနဲ့ အရှိန်ထနေတာ .. အခိုးတွေထွက်နေတဲ့ ပြောင်းဖူးပြုတ်နဲ့တောင် တူနေမလား မသိဘူး
"သဲ .. ဘယ်အချိန်ကတည်းက နိုးနေတာလဲ .."
"၁၅မိနစ်လောက်ရှိပြီ .. ကိုကြီးက လူကသာမနိုးတာ .. ကောင်လေးက နိုးနေတာတွေ့လို့ သဲလဲ မနေနိုင်တော့တာနဲ့"
"အင်း .. သဲဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲ .. ကိုကြီးလုပ်ရမလား"
"ဟင့်အင်း ရတယ် .. သဲဖာသာသဲလုပ်မယ် .. ကိုကြီး ပြန်မှိန်းနေလိုက်"
"အိုကေ .. အိုကေ"
သူ့ဟာသူပြော၊ သူ့ဟာသူ စီမံခန့်ခွဲပြီး၊ သူ့ဟာသူပဲ လုပ်ဆောင်သွားတယ်။ ကျနော်ဘာမှ ၀င်မပြောတော့ဘူး။ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ တခါတလေကျတော့ အဲဒီလိုမျိုး သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်း နေပေးလိုက်ရတယ်ဗျ။ ယောက်ျားလေးတွေအပေါ် တစ်နည်းနည်းနဲ့ သြဇာသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာ သူတို့ သိတယ်ဆိုရင် သိပ်ပြီးတော့ စိတ်ကြည်နူးတတ်ကြတဲ့ ဗီဇလေးတွေ မိန်းကလေးတော်တော်များများမှာ ရှိကြတယ် မဟုတ်လားဗျ။ သူတို့တွေ စိတ်ကြည်နူးတော့ ကိုယ်တွေလည်း ကြည်နူးရတာပေါ့ဗျာ .. အခုပဲ ကျနော့်ကြည့်လေ
လျှာလေးနဲ့ သူ့ပါးစပ်ထဲရောက်နေတဲ့ လိင်တံပတ်ချာလည်ကို လှည့်ပတ်ထိုးဆွနေတဲ့ အရသာက တထုတ်ထုတ်နဲ့ တယ်ကောင်းတာပဲဗျ။ ခေါင်းကို အနိမ့်အကြွလုပ်ပြီး လိင်တံကို စုပ်ပေးနေတာကလည်း ကောင်းနေတဲ့အရသာကို ပိုပြီးကောင်းအောင် ဖန်တီးပေးနေသေးတာ။ တစ်ခုအဆင်ပြေတာက ကျနော့် သက်ဆိုင်သူနဲ့ ကျနော်နဲ့က ဒါမျိုးကိစ္စတွေမှာ seasoned ဖြစ်နေပြီ။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ အထူးအထွေ ပြောနေစရာ မလိုဘူး။ ဘယ်ကွေ့မှာ ဘာတက်နဲ့ လှော်ရမယ်ဆိုတာ သိနေတဲ့သဘော
လိင်တံက စံချိန်မီ မာပြီးတင်းလာပြီဆိုတဲ့အချိ်န် ပါးစပ်ထဲကနေ ချွတ်ထုတ်လိုက်ပြီး၊ ကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာ လွှမ်းထားတဲ့ စောင်ကို အောက်တွန်းချပြီး ကျနော့်ပေါ် ခွထိုင်တော့တာပဲ။ သဲလို့ခေါ်တဲ့ ကျနော့် သက်ဆိုင်သူက ကောင်မလေးတွေ ညဘက်ကျရင် အိပ်ဝတ်လေ့ရှိတဲ့ အပေါ်အောက်တဆက်ထဲ ချည်သားဂါဝန်ကို ၀တ်ထားတာ။ ဂါဝန်စက ဒူးဖုံယုံပဲ ရှိတာဆိုတော့ အောက်ခြေကနေ ဆွဲမလိုက်တာနဲ့ စိုပြည်တောင့်တင်းတဲ့ သဲရဲ့ အောက်ပိုင်းက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကို ထွက်လာတော့တာပဲ။
အမယ် .. ဒီကောင်မလေး။ ကျနော်နဲ့ ချောင်းသာကို ခရီးထွက်ရမယ်ဆိုတာ သိနေလို့နဲ့တူတယ်။ သေချာကို ပြင်ဆင်လာတာဗျ။ အဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးတလျှောက် မပြောနဲ့၊ ခါတိုင်းရှိနေတဲ့ အပေါ်ဘက်ခြမ်းက တြိဂံပုံ ဘုတ်စုလေးတောင် မရှိတော့ဘဲ ပြောင်တလင်းခါနေတာ။ ဘာဆိုဘာမှ မရှိဘဲ ပကတိပြောင်ရှင်းပြီး ဖြူဖွေးနေတော့ အဖုတ်အကွဲကြောင်း နီတာရဲလေးတောင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နေရတာ။ အဲ့လို မြင်နေရတာကိုမှ သဲက ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်အနေအထားမှာ လက်မနဲ့ လက်ညိုးကိုသုံး၊ အ၀လေးကို ဟလိုက်တော့ အထဲက အရည်ကြည်လဲ့နေတဲ့ နီတာရဲလေးတွေပါ မြင်ကွင်းထဲရောက်လာရော .. ဟူးးးး
ဒါပေမယ့် ဒီမြင်ကွင်းက ခနပါပဲ။ လွတ်နေတဲ့ နောက်ထပ်လက်တစ်ဖက်နဲ့ ကျနော့်လိင်တံကို ဖမ်းကိုင်ထိမ်းပြီးနောက်တော့ နီရဲတင်းပြောင်နေတဲ့ ထိပ်ဖူးဝဟာ ခုနက နီတာရဲလေးတွေ ရှိနေရာ ကျင်းလေးထဲကို တည့်တည့်မတ်မတ် ၀င်သွားပါတော့တယ်။ ကောင်းတယ်ဗျာ .. အကြောတွေ အပြိုင်းပြိုင်းထပြီး အသားကုန် တင်းမာနေတဲ့ ကိုယ့်လိင်တံ အဖုတ်အိအိလေးထဲကို ၀င်သွားရတဲ့ အရသာဟာ တကယ့် ဇိမ်ပဲဗျ။ ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်ဘဲ ပြောတဲ့အတိုင်း ပက်လက်ကလေးပဲ ငြိမ်ငြိမ်လေး နေပေးထားတဲ့ ကျနော်တောင် အင်းခနဲ နှုတ်ကထုတ်ညည်းမိတယ်။
"ကောင်းတယ် .. ကိုကြီးရာ .. ကောင်းတယ် .. သဲလွမ်းနေတာ ... အီးးးးး"
ကျနော့် သက်ဆိုင်သူ .. သဲက စကားကို တီတီတာတာနဲ့ ပြောတတ်တဲ့ ကောင်မလေးဗျ။ အများသူငှာ ရှေ့မှာဆိုရင်တော့ ပုံမှန်ပြောပေမယ့် နှစ်ယောက်ထဲတွေ့တဲ့အချိန်မျိုးဆို အသံချိုချိုလေးနဲ့ လူနားကပ်ပြီး တတွတ်တွတ်ပြောတတ်တာ။ သူနဲ့အတူနေရတာ အလှမွေးကြောင်ဖြူမလေးတစ်ကောင် ကိုယ့်အနားမှာ ရှိနေသလိုပဲ။ အင်မတန်မှ ပွတ်သီးပွတ်သပ် နိုင်တာ။ အခုလိုမျိုး လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမျိုး (အမှန်ကတော့ making love လို့ သုံးချင်တာပါ) ဆိုရင်လည်း ခပ်ရင့်ရင့်စကားတွေ ဖြစ်တဲ့ လီးတို့ လိုးတို့ မပြောပေမယ့် သူ့ဟာနဲ့သူတော့ စကားလေးတွေပြော .. နှုတ်ကလည်း အဆက်မပြတ် ညည်းနေတတ်တာ။ ထိတယ် .. ကိုကြီးရာတို့၊ တအားကြီး မာပြီးတင်းနေတော့ အထဲမှာ အားရစရာကြီးတို့ ဘာတို့ .. အဲဒါမျိုးတွေ ပြောပြောနေတတ်တာဗျ ...
အခုလဲ လိင်တံတစ်ချောင်းလုံး အဖုတ်ထဲကို ၀င်သွားပြီးနောက်၊ နှုတ်ခမ်းထောင့်စွန်းလေးကို သွားလေးနဲ့ ဖိကိုင်ထားရင်း ကျနော့်ရင်ဘတ်ကို လက်နဲ့ထောက်ပြီး ကြမ်းနေတာ။ ကြက်ဖခွပ်သလို ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် အနေအထားနဲ့ သူတင်အိုးကားကားလေးတွေကို အပေါ်ကို ပင့်မြှောက်လိုက်၊ အောက်ကို ဖန်းခနဲမြည်အောင် ပြန်ချလိုက် ဆက်တိုက်လုပ်နေတာ။ အခန်းထဲမှာ အဲယားကွန်းလေနဲ့ အေးနေတယ်ဆိုပေမယ့် အခုအချိန်မှာ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်စလုံး အေးတယ်လို့ မခံစားရတော့ဘူး။ ကာမဆက်ဆံမှုရဲ့ ရလဒ်အနေနဲ့ တကိုယ်လုံးမှာ သွေးတွေက ပူနွေးစွာ လှည့်ပတ်နေပြီလေ။ ဂျော်ကီမလေး သဲရဲ့ မျက်နှာလေးဆိုရင် ၀င်းဝင်းပြောင်ပြောင်လေးတောင် ဖြစ်နေပြီ။
"အီး .. ကောင်းတယ် .. ကိုကြီးရာ"
တအောင့်ကြာတော့ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ရတာ မောသွားလို့လား မသိဘူး၊ ကျနော့်ဆီးစပ်ပေါ် သူ့တင်ပါးအိအိလေးတွေ ပြန်အကျ ထပ်ပြီးတော့ မ တင်တာ မတွေ့တော့ဘူး။ အဲဒီအစား အပေါ်ကနေ မုန့်ကြိတ်ဆုံ လှည့်သလို ဆီးစပ်ချင်း ဖိကပ်ထားရင်း မွှေတော့တာပဲ။ ခါတိုင်းဆို ဒါမျိုးလှည့်ရင် သူ့အမွှေးတွေနဲ့ ကျနော့် အမွှေးညိရင်း တဗြိဗြိနဲ့တောင် မြည်သေးတာ။ အခုတော့ သူ့အဖုတ်လေးက ပြောင်ရှင်းခါနေတော့ ဒါမျိုးအသံ မထွက်ဘူးရယ် (ဒီလို စဉ်းစားမိတော့ ကျနော့်မျက်နှာက ပြုံးချင်ချင်တောင် ဖြစ်သွားသေး)
"ကိုကြီး .. မပြီးသေးဘူးလား .."
"အင်း .. မပြီးသေးဘူး .. သဲရော"
"သဲက ခုနကတည်းက နဲနဲ ပြီးသွားပြီ .. အခုလည်း ဖြစ်တော့မှာ .. ကိုကြီးပါ လိုက်ပြီးလိုက်လေ"
"ဒါဆို .. ဟိုဘက်လှည့်ပြီး စောင့်လေ"
"အိုကေ .. လုပ်ပေးမယ်"
ကျနော့် အကြိုက်ပိုစက်ရှင်ကို သူပြောင်းပေးတယ်။ တခြားတော့ မဟုတ်ဘူး။ ခြေရင်းဘက်ကို မျက်နှာမူပြီး နောက်ပြန်ဆောင့်ပေးတာ။ ဒီလိုအနေအထားကို ကျနော် တအားကြိုက်တာ။ သဲရဲ့ တင်အိုးတွေက လုံးဝန်းပြီး စွင့်ကားနေတော့ ဒီလိုမျိုးအနေအထားမှာ အင်မတန်မှ စိတ်ထဖို့ ကောင်းတာလေ။ နောက်ပြီး အဲဒီဖင်အိုးတွေ ကြားထဲက အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးထဲကို ကိုယ့်လီးက တိုးခွဲပြီး ၀င်နေတယ်ဆိုတဲ့ အသိက အင်မတန်မှ ခံစားလို့ကောင်းတာ (ဒီအချက်ကို ကိုယ့်ဆြာတို့ သဘောတူကြမှာပါနော်)
သိပ်တောင် မကြာလိုက်ပါဘူး .. နေရာပြောင်းပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်း သဲက နောက်ပြန်ဆောင့်ပေးတာ ဆယ်ချက်ကျော်ကျော်လဲ ရောက်ရော .. ကျနော်လည်း ဘယ်လိုမှ အောင့်မထားနိုင်တော့ဘဲ ပူနွေးတဲ့ သုတ်ရည်တွေကို အဖုတ်ရဲရဲလေးထဲ တအားကုန်ကို ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တော့တယ် ... အူးးးးး .. ကောင်းလိုက်တာဗျာ
Posted by အမည်မသိစာအုပ် at 11:43